China EFB otu ngafe draya factory na-emepụta | Opps Group
Otu ngafe draya usoro
• Na otu ngafe draya, udu mmiri tinye na-agwakọta ozugbo na-ekpo ọkụ gas n'ime n'usoro gwara mmanụ drum. The mmiri ihe na-ekpo ọkụ gas ejikari igba concurrently site draya otú kacha ekpo ọkụ ugbu, haruru-abịa na kọntaktị na kasị dịrị mmiri mmiri na ihe onwunwe.
• The ngwaahịa a mịrị amị na-ekpo ọkụ gas na 350 ºC ruru. na rotary drum. The rotary drum ekewa iche iche na ngalaba nke a elu arụmọrụ ke egbu nke akpịrị ịkpọ nkụ. Ke akpa kọntaktị n'etiti ndị Alụlụụ na ngwaahịa, a n'amaghi evaporation na-emepụta na-akpata a okpomọkụ dobe ka 150-180 ºC. Ozugbo, a na-adịghị na-aga n'ihu ihicha na-ewe ebe ruo mgbe na-eru a okpomọkụ nke 95-110 ºC na tinyekwa nke rotary drum.
• The adiana nke drum, site n'enyemaka nke flights, na-akwalite solids na draya otú ha idahari site na-ekpo ọkụ gas, na-akwalite mma okpomọkụ na uka nyefe. Hot flue gas nwere ike nri kpọmkwem n'ime draya. Ọzọ nhọrọ na-agụnye iji a burner ma ọ bụ a uzuoku okpomọkụ ịkpọlite ndị okpomọkụ nke na-abata ikuku.
• The iyuzucha, haruru ahapụ draya nwere ike gabiga a na naa, multi-naa, baghouse iyo, scrubber, ESP ma ọ bụ WESP wepụ ọ bụla ezi ihe onwunwe entrained na gas. An ID ofufe a na-emekarị enịm mgbe umu anwuru akara ngwa iji belata ozize nke onye ofufe, ma e nwekwara ike enịm n'ihu mbụ naa inye nsogbu dobe site downstream akụrụngwa.
Single ngafe draya pụrụ ịnakwere a pụtara dịgasị iche iche nke ahụ nha, mmiri ọdịnaya ma ọ bụ throughput na ka nweta elu ihicha udu. The imewe kwe na ojiji nke kasị elu na o kwere omume ihicha okpomọkụ.
The drum agbagharị site abụọ nnukwu tracks na ịgha ụgha na anọ machined rollers, abụọ n'akụkụ nke ọ bụla nke drum. The wiil na-n'ịnyịnya na a support ngọngọ na bugharia site abụọ amị na-akwado onye ọ bụla n'ịnyịnya na njedebe nke wheel aro. The support ngọngọ na rotary drum tinyekwa, nwere ihe abụọ gia Motors nke rụọ ụkwụ abụọ nke na drum ngọngọ, ma si otú ahụ rotary drum bugharia na ya kwụ anyu. Adiana ọsọ nke drum ga-mgbanwe site ugboro Ntụgharị 3-6 rpm. Na drum drive ngọngọ abụọ ọnọdụ rollers na-enịm izere longitudinal Ndahie nke rotary drum, tumadi ruru ka mgbasa ahụ. Ndị a rollers jikwaa aka n'ime akụkụ nke track, n'usoro n'elu ya aro mgbe a na kọntaktị na-emepụta. The rotary drum na-thermal dịpụrụ adịpụ site eriri ajị na mputa sheeting, si otú ọbọ ala radieshon okpomọkụ losses.
The usoro edumbet otu ngafe draya.
• The technology nke anyị otu ngafe draya na-eji Vandenbroek VDB rotary drum draya. The VDB MPS (Multi-ngafe-usoro) bụ mepụtara si Vandenbroek, nke a na-eji ọtụtụ ebe na ubi nke mere pallet, biomass, sludge, coal, msw, etc kemgbe 1948, na òkè nke draya bụ na gburugburu 30% na ndị ụwa na-aghọ otu n'ime ndị kasị ama atọ emepụta ke ahịa, ndị ọzọ na abụọ ụdị bụ Nyrup na Denmark na Sulzer na Switzerland.
• VDB MPS rotary drum draya bụ ọtụtụ ihe mejupụtara nke drum na rotary ngafe. Ọ bụla ngafe nwere pụrụ iche size of itinye n'ọkwa efere, na itinye n'ọkwa efere na-emi odude na ejupụta weir efere na akara nke aro ka ngafe. All na itinye n'ọkwa na-achọkwa ka ngọngọ ụdị.
ihe na-akpali na rotary edu ngafe site rotary ike site si drum na mma agha site na-ekpo ọkụ ikuku, nke mere na ihe onwunwe pụrụ kpamkpam okpomọkụ okpụhọ n'ime drum, na-eme ka n'aka ndị ikpeazụ mmiri bụ 2% -3%.
The n'ime constructure bụ dị ka ndị
Uzo mmiri na-ekpo ọkụ ikuku na kọntaktị na ihe onwunwe nke elu mmiri. Okpomọkụ si elu okpomọkụ na-ekpo ọkụ ikuku etinye obi gị dum site na mmiri n'ime ihe onwunwe na Takọọ. The okpomọkụ nke ihe onwunwe maintenace otu larịị, ọdịnaya nke mmiri na-lowered ala site ẹsụhọde ala okpomọkụ nke na-ekpo ọkụ ikuku. Mgbe e mesịrị, na-ekpo ọkụ ikuku na ala na okpomọkụ na-Fikiere ihe na-aga site bụla ngafe ọnụ, n'oge usoro a, na-anọgide na mmiri n'ime ihe onwunwe bụ Takọọ na ala okpomọkụ.
Previous: Supercritical CO2 Hemp mmanụ Mmịpụta
Pellet Mill “Afọ atọ mara mma nke…
Msw mmako , Granulator , Rdf Mmanụ , Tree Shredder , ala Mill , Plastic Granulator ,